Trópico waxaa la sii dayn doonaa Sebtember 5 ee loogu talagalay Android | Androidsis
Eder Ferreno | | Ciyaaraha Android
Trópico waa ciyaar macquul ahaan u eg sida kuwa badan, mar hadday tahay ruug-caddaa suuqa ku jira. Waxay ku soo noqotay 2001 gacanta PopTop Software. Ciyaartan, waxaan ku noqon lahayn maamule jasiirad Caribbean ah, ciyaar u shaqeysa sida kaftanka iyo dhaleeceynta siyaasadeed ee waddamada qaar ee aaggan. Sanadihii la soo dhaafay, noocyo cusub ayaa la sii daayay waxaana la sheegay in ciyaarta ay gaari doonto taleefannada.
Ugu dambeyntiina, waqtigii waa yimid, maadaama Trópico ay si rasmi ah uga soo gasho Android. Waxaa laga sii deyn doonaa Sebtember 5 Play Store, in kastoo hada aan isdiiwan gelin karno si aan ciyaarta ugu bilowno.
Trópico horeyba waxaa loogu heli jiray macruufka, labadaba iPhone iyo iPad. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in ugu dambeyn si rasmi ah loogu bilaabay taleefannada Android. Intaa waxaa sii dheer, ciyaarta ayaa ilaalin doonta nuxurka asalka marwalba, ciyaartiisa si fudud ayaa loogu waafajiyay taleefannada gacanta, sida caadiga ah kiisaskan.
Hordhaca ciyaarta waxba iskama bedelin. Waxaan noqon doonnaa Madaxweynaha jasiirad mala-awaal ah oo ku taal Kariibiyaanka. Waxaan daryeeli doonnaa horumarka ganacsiga iyo magaalooyinka ee isku mid ah, marka lagu daro inaan ka farxinno dadka deggan jasiiradda markasta, si looga fogaado rabshadaha. Sidoo kale waa inaan ogaanno sida loola macaamilo qeybaha kala duwan ee siyaasada iyo xiriirka aan la leenahay wadamada kale.
Marka waa wax aan macquul aheyn in lagu caajiso ku ciyaarida Trópico on Android, adoo arkaya wax walba oo jira in la sameeyo. Bilaabashadiisu waxay noqon doontaa 5 Sebtember, sidaan horayba u soo sheegnay. Soo dejinta ciyaarta ayaa ku kici doonta 11,99 euro. Markaa waa ciyaar qaali ah oo macno leh, inkasta oo taa beddelkeeda aysan jirin wax iibsi ama xayeysiis ah. Laakiin waa la heli karaa in yar, qaar badan oo ka mid ah ma rabaan inay bixiyaan wax badan.
Mabda 'ahaan waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada taleefannada AndroidInkasta oo abuurayaasha Trópico ay shaaca ka qaadeen liistada moodooyinka lagu taliyay, ee ay u muuqato inay sida ugu fiican u shaqeyn doonto. Kuwani waa Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, HTC U12 + Huawei Honor 10, Huawei Mate 10, Huawei Mate 20, LG V30 +, Meizu X8, Motorola Moto Z2 Force, Nokia 8, OnePlus 5T, OnePlus 6T, Razer Phone, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note9, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 +, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy Tab S4, Sony Xperia XZ2 Compact, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Pocophone F1.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Trópico waxaa lagu sii deyn doonaa Android 5-ta Sebtember
Huawei Mate X ayaa dib u dhacay markale